लहरमा उभिन पुगें
२०७७ माघ ३० गते , शुक्रवार प्रकाशित
मण्डलाको छेवैमा रहेको फलामको बेन्चमा बसेर साथीहरूको प्रतिक्षा गरिरहेको थिए । साथीहरू आउने क्रम बढेको थियो । सडकको एउटा कुनामा आफ्र्ना एकसय जति माग सहित पंक्ति मिलाएर केहि मानिस बसिरहेका थिए । पश्चिमपट्टिबाट एउटा हुल आयो । झण्डा र व्यानर पनि थियो ।
‘सरकार खुट्टा नकमाउ, तिम्लाई हाम्रो साथ छ’ को चर्को नारा लगाउँदै तिनीहरु अगाडि बढे । प्रहरीलाई पनि समुहसमुह बीच झडप नहोओस् भन्ने थियो सायद – हरेक समुहलाई घेरा हालेको थियो, मानौं, डढेलोले जगंल सखाप गर्न हालेको घेरा जस्तो ।
‘अधिनायकवादी सरकार, मुर्दावाद!’, ‘जनघाती सरकार, मुर्दावाद!’, ‘राष्ट्रघाती सरकार, मुर्दावाद’, ‘असंवैधानिक संसद विघटन खारेज गर’ को नारा लगाउँदै अर्को समुह आयो । यो अलि दुब्लो थियो । यो पनि हेर्दाहेदै बिलायो ।
मानिसहरूको चहलपहल बढेकै छ । बेन्चको छेउमा बसिरहेका देख्दा सामान्य लाग्ने अधबैंसेले भने, ‘जनताले पाँच बर्ष सरकार चलाउन दिए, यी बाँदरहरूले चलाउन सकेनन्, सडकमा समर्थन र विरोधको नारा लगाउँछन् । विदेशीको गोटी हुन त अब छोड्नु नि ! नक्कली नारा लाउन छोड्नु नि !’ उनको भावमा आक्रोश भरिपूर्ण थियो ।
सडकको अर्को कुनामा तराईबाट आएका उखु किसान आफ्नो श्रमको, उत्पादनको मुल्य साहुहरूले लुटेको, नदिएको दुखेसो पोख्न आएका थिए । भोकभोकै चिसो सडकमा मर्न विवश थिए । उनीहरूको बारेमा कसैले नारा लगाएको देखिएन । हाम्रो बालीको पैसा देऊ, किसानको हुर्मत नलेऊ, जस्ता नारा सहित निरिह बसिरहेका थिए । पीडाले भावविह्वल थिए ती ।
कोरोनाका कारण देखाउँदै निष्काशनमा परेका मजदुरहरू पनि सडकको अर्को छेउमा ‘धन कमाइदिउञ्जेल सेवा भन्दा कम मुल्यमा काम गरेकै हो, हाम्रा कामले उनीहरूको महल बनेकै हो, आज विपतमा हामीलाई एकछाक टार्न पनि मुस्किल छ, उल्टै जागिरबाट निस्कनु प¥यो ! हाम्लाई काम देऊ, माम देऊ, भाडाको बस्तु नबनाऊ! ’ जस्ता नारा सहित थाकेको शरीरले भएपनि मुठ्ठी उठाइरहेको थिए ।
बेञ्चमा बसेर यी थरिथरिका नाराजुलुश नियालेँ । किसान र मजदुरका समस्या समाधानमा सहयोगी हुन पाए हुन्थ्यो झैं लाग्यो ।
‘राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर ! आर्थिक स्वाधीनता कायम गर ! जनताको राज स्थापना गरौं ! देशको शान मजदुर र किसान एक होऔं ! शोषित उत्पीडित एक होऔं ! सबै प्रकारका जालझेल र भ्रमबाट मुक्त होऔं !’ जस्ता नाराहरू लगाउँदै सानो समुह किसान मजदुरको प्रकी झण्डा फहराउँदै आएको देखियो ।
केही बुढ्यौली उमेरका, केही तन्नेरी र केही अधबैंसे महिलापुरुषको समुह, तराईपहाड र हिमाल तिरका जस्ता देखिनेहरूको लहरमा म उभिन पुगें ।